Falastiin: Hoggaanka Sare oo u codeeyay hakinta aqoonsigii Israel – Kasmo Newspaper
Falastiin: Hoggaanka Sare oo u codeeyay hakinta aqoonsigii Israel
Updated - January 16, 2018 12:58 pm GMT
London (Kasmo), Hoggaanka Sare ee Falastiin ayaa u codeeyay in hakad la galiyo aqoonsigii Israel, sida ku qeexan Heshiisyadii Oslo, iyo waliba wada shaqayntii xoogagga Israel ee dhanka nabadgalyada.
Golaha Dhexe ee Hoggaanka Sare oo kulankoodii 28aad ka socday Ramallah, intii u dhexatysay 14-15kii Jenaayo 2018 waxaa looga dooday go’aankii 6dii Disembar 2017 Donald Trump ku aqoonsaday Qudus in ay noqoto Caasimadda Israel.
Madaxweynaha Maamulka Falastiin,Maxamuud Cabbaas ayaa is-xilqaanka Donald Trump ee nabadda ku tilmaamay sidii ay la mid tahay ‘dharbaaxadii qarniga’
Ma kala cadda wali in go’aanka ka noqoshada aqoonsiga Israel dhaqangal noqon doono iyo in kale, marka la tixgaliyo in xitaa midka wadashaqaynta nabadgalyada loo codeeyay 2015kii, waligiina aan la hirgalinin.
Heshiisyadii Oslo waa ballanqaadyo xiriir ah oo, intii u dhexaysay 1993-1995, dhexmaray Ururka PLO ee xoreynta Falastiin iyo Israel, kuwaas oo dhabbaha u furay geedisocodkii lagu gaari lahaa nabad dhexmarta 2da dhinac.
Ballanqaadyadaas waxaa ka dhashay aqoonsiga midba midka kale, Israel iyo Ururka PLO oo noqonaya midka qur ah ee sharci ahaan matalaya dadweynaha reer Falastiin.
Waxaa sidoo kale doodaha ka mid ahaa xuduudaha Israel iyo Falastiin, dhulballaarsiga Israel iyo maqaamka magaalada barakaysan ee Qudus.
Mas’uuliinta Falastiin waxay Ururka PLO ku amreen in uu hakad galiyo aqoonsiga Israel ilaa inta Israel ka aqoonsanayso Dawladda Falastiin, ka nasakhayso ku darsashada Bariga Qudus, kana joojinayso dhismayaasha dhulalka Falastiin.
Isniintii, 15kii Jenaayo, mas’uuliinta Israel ayaa dhaleeceeyay ereyada ka soo yeeray Maxamuud Cabbaas, R/Wasaare Netanyahu oo socod ku maraya Indiya ayaa u sheegay Falastiin in aanay helayn kaalin uga roon oo baddeli karta Maraykanka, dhinaca dhexdhexaadinta.